NUSOJ oo tababar Garoowe uga furay 30 Wariye (Sawiro) – Radio Daljir
NUSOJ oo tababar Garoowe uga furay 30 Wariye (Sawiro)
Luulyo 10, 2021 3:56 g 0
Ururka Qaranka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ oo kaashanaya Hay’ada UNESCO ayaa maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 10 July 2021 magaalada Garoowe ka daahfuray tababar 30 wariye oo ka socda xarumaha Warbaahinta ee Garoowe lagu barayo Tebinta Doorashooyinka, ciribtirka wararka been abuurka ah iyo ka hortaga Hadalada nacaybka .
Furitaanka Tababarkan waxaa kasoo qaybgalay Wasiirka Wasaarada Warfaafinta, Isgaarsiinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Puntland Mudane Cabdilaahi Cali Xirsi (Timacade), Gudoomiyaha Gudiga Hirgelinta Doorashooyinka heer Federal ee Soomaaliya mudane Maxamed Xasan Cirro iyo Xoghayaha guud ee NUSOJ Cumar Faaruuq Cismaan.
Omar Faruk Osman Xoghayaha Guud ee Ururka Qaranka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa sheegay in tababarkan looga hadlayo Xorriyadda hadalka iyo ka foggaanshaha Wararka abuuraya naceybka iyo takoorka, iyadoo ujeedadu tahay in la helo jewi nabdoon iyo doorasho nabad ku dhacda oo wariyayaashu door muhiim ah ku yeeshaan.
Gudoomiyaha Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka heer Federal ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xasan Cirro oo hadal ka jeediyey furitaanka Tababarkan oo uu kaga qaybgalay Aalada Internetka ee ZOOM ka ayaa wariyayaasha ku booriyey inay noqdaan kuwo ka fogaada waxkasta oo abuuri kara khalkhal ku yimaada Geedi-Socodka Doorashooyinka dalka oo ay ugu horayso wararka been abuurka ah iyo hadalada nacaybka abuuri kara.
Wasiirka Wasaarada Warfaafinta, Isgaarsiinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Puntland Mudane Cabdilaahi Cali Xirsi (Timacade) ayaa si rasmi ah u furay Aqoon Iswaydaarsigan soona dhoweeyay dhammaan shaqada NUSOJ hayso oo muhiim u ah in la helo wariye Xirfad leh si habsami lehna uga qayb qaata geedi socodka doorashooyinka ee Soomaaliya, sidoo kalena ku nuux nuuxsaday muhiimada ay leedahay in laga wada shaqeeyo Xorriyadda hadalka iyo doorasho nabad ku dhacda.
Ugu dambeyn Timacade ayaa Wariyayaasha u jeediyey talooyin ku aadan Xorriyadda hadalka iyo ka feejignaanta hadalada naceybka iyo takoorka abuuraya, isagoona Wariyaasha kula dardaarmay inaysan noqon kuwa ka gudba anshaxa saxaafadda.
Ra’iisul Wasaaraha xukumadda Soomaaliya oo gaaray Garbaahrey (Sawiro)